[Tuesday, April 18th, 17] :: Xisbiga Kulmiye Oo Masuuliyiin Cusub U Magacaabay Gobolka Hawd
Hargeysa(RH)Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa Maanta Masuuliyiin Cusub u Magacaabay Gobolka Hawd.Masuuliyiintan ayaa ka kooban 15 Xubnood,Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye ayaa Xubnahan ilaahay Uga Rajeeyey inuu ku asturo, kuna guuleeyo gudashada masuuliyadda xilalka loo Magacaabay
Ujeeddo: Magacaabista Guddida Fulinta xisbiga KULMIYE ee Gobolka Hawd.
Kadib markii aan arkay muhiimadda dhismaha Guddida Fulinta Gobolka Hawd ee xisbiga KULMIYE u leeyahay hawlaha iyo habsami-u-socodka abaabulka xisbiga, waxa maanta oo ay bishu tahay April 18th, 2017 loo magacaabay xubnaha hoos ku qoran in ay noqdaan Guddida Fulinta Gobolka Hawd ee xisbiga KULMIYE.
3. Cabdillaahi Maxamed Cali - In maanta laga bilaabo uu ahaado Xoghayaha Gobolka Hawd ee xisbiga KULMIYE.
4. Cabdiqani Faysal Maxamed - In maanta laga bilaabo uu ahaado Guddoomiyaha Garabka Dhallinyarada Gobolka Hawd ee xisbiga KULMIYE.
5. Jamaad Aw Ismaaciil Qallinle - In maanta laga bilaabo ay ahaato Guddoomiyaha Garabka Haweenka Gobolka Hawd ee xisbiga KULMIYE.
6. Xaawa Abiib Cabdi - In maanta laga bilaabo ay ahaato Guddoomiye-ku-xigeenka Garabka Haweenka Gobolka Hawd ee xisbiga KULMIYE.
7. Safiya Ismaaciil Daahir - In maanta laga bilaabo ay ahaato Afhayeenka Garabka Haweenka Gobolka Hawd ee xisbiga KULMIYE.
8. Cabdixakiin Maxamed Maxamuud (Cabdixakiin Cujuul) - In maanta laga bilaabo uu ahaado Madaxa Xidhiidhka Komishanka Doorashooyinka Gobolka Hawd ee xisbiga KULMIYE.
9. Axmed Cabdillaahi Aw Cabdi (Axmed Daahir) - In maanta laga bilaabo uu ahaado Madaxa Xidhiidhka Gobolka iyo Degmooyinka xisbiga KULMIYE ee Gobolka Hawd.
10. Cabdirisaaq Muuse Cali - In maanta laga bilaabo uu ahaado Madaxa Xidhiidhka Saxaafadda iyo Warbaahinta Gobolka Hawd ee xisbiga KULMIYE.
12. Cabdirixiin Cabdillaahi Yuusuf - In maanta laga bilaabo uu ahaado Madaxa Siyaasadda iyo Nabadgalyada Gobolka Hawd ee xisbiga KULMIYE.
15. Cabdalle Maxamed Kirix - In maanta laga bilaabo uu ahaado Ku-Xigeenka Madaxa Abaabulka iyo Wacyigelinta Gobolka Hawd ee xisbiga KULMIYE.